Guerrilla Marketing Plan (GMP) • Toe Tet Online Learning Platform
Toe Tet Essentials
Toe Tet Diploma
Today Promotion = 99,000 Ks
၁. Facebook က ကြော်ငြာပေမယ့် မထိရောက်ဘူးဖြစ်နေပါသလား? ၂. မိတ်ဆွေမှာ Marketing Plan တစ်ခုမရှိဖြစ်နေပါသလား? ၃. ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားမှာ မဟာဗျူဟာမဲ့ဖြစ်နေပါသလား?
“အပြိုင်အဆိုင်” ဒီနေ့ခေတ်မှာ လုပ်ငန်းအပြိုင်အဆိုင်တွေပိုများလာတယ်။ အရင်ကထက်ပိုမို ပြင်းထန်လာပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေရှင်သန်ဖို့ပိုရုန်းကန်ရပါတယ်။ “အံဝင်ဂွင်မကျ” သမရိုးကျ စေးျကွက်ရှာပညာရပ်နဲ့မရတော့ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လည်း ဆိုတော့ သမရိုးကျ စျေးကွက်ရှာပညာရပ်ဟာ company ကြီးများအများစုကို သာလေ့လာထားတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
“Guerrilla Marketing Plan ကို တတ်ရောက်သင့်သူများကတော့”
SME လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
“Guerrilla Marketing Plan သင်တန်းမှာဘာတွေလေ့လာရမလဲ?”
1. Guerrilla Marketing လက်နက်အခု 100 ကို သိသွားမယ်။
2. Maximum Result ကိုရရှိဖို.နည်းလမ်းတွေရသွားမယ်။
3. Fusion Marketing ကို အသုံးပြုပြီး ရောင်းအားတွေ တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သွားမည်။
4. Guerrilla Marketing Plan ပြုလုပ်သည်.7steps ကိုကောင်းကောင်းသိသွားမည်။
5. Social Media Marketing Strategy & Tactics တွေကိုသေချာနားလည်အသုံးချတတ်လာမယ်။
Ma San May Aungကြယ်စင်လင်း ဖုန်းဆိုင်
Marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံကနေစတင်လေ့လာခဲ့ရတဲ့ Y.E.C learning center လေးမှာ ဆရာဖြိုးပိုင်သင်ကြားပေးတဲ့ action course တွေအားလုံးကိုအမှန်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းမှာအလွန်အသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလည်းဆရာ့ထံမှအသစ်အသစ်သောလက်တွေ့အသုံးချနိုင်သောmarketing ပညာရပ်များကိုကြိုးစားလေ့လာသင်ယူချင်ပါတယ်ရှင့်။အခုလိုမျိုးဆရာကြိုးစားပြီးလေ့လာသင်ယူထားသမျှအရာအားလုံးကိုမကြွင်းမကျန်ဆရာစားမချန်ဘဲအိတ်သွန်ဖာမှောက်အလွယ်တကူအသုံးပြုလွယ်ကူစေရန်အတွက်short point လေးတွေထုတ်ပြီးအမြဲအမှတ်ရနေစေရန်သင်ကြားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါဆရာ။
GMP တတ်ပြီးမှmarketingနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ideaတော်တော်များများရပြီး Marketing နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Thinking ပိုင်းလုံးဝပြောင်းသွားပါတယ်။ ဆရာဖြိုးပိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။
Saw Naung MyoOperations Executive
Thwe Thwe Glbmခရီးသွားလုပ်ငန်း
Kyaw Soeလုပ်ငန်းရှင် @ မန်းမြို့
အလွန်အကျိုးရှိတဲ့GMP marketingပါ။အရင်တုန်းကကိုယ့်နားမှာရှိပြီးသတိမထားမိတဲ့အရာတွေပိုမြင်လာတယ်။ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ideaတွေအများကြီးရပါတယ်။ကျေးဇူးပါဆရာဖြိုးပိုင်
အရင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ marketing ideas ‌ေတွေကို ရရှိလာတဲ့အတွက် လုပ်ငန်း မှာလည်း ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ‌ေဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်
Ma Winthiri Han
Today Promotion 99,000 Ks
(1.2) G (give before you can get)
(3) Expert Power
(4) Relationship Marketing
(6) Influencer Marketing
(7) Look for the horizon and co-operate
(8) Leverage new technology
(9) Key Activities
(10) Target Market (M)
(13) Knowledge (Content Marketing)
(13.1) Content Planning 101
(13.2) Content Writing vs Copywriting
(15) Timing (BUMP)
(17) Niche Market
(18) Grow Your Profit
(19) steps plan
(20) Bonus: Online Business Plan Software (Live Plan)
(22) Bonus: Guerrilla Marketing 2
(23) Bonus: Guerrilla Marketing 3
(24) GMP student videos